यो स्पेन मा मौसम परिवर्तन को प्रभाव को नक्शा हो नेटवर्क मौसम विज्ञान
संयुक्त राज्यका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पेरिस सम्झौता त्याग्ने निर्णय गरिसकेका छन, जलवायु परिवर्तनका असरहरू संसारभरि नै महसुस भइरहेको छ। स्पेन मा हामी अनुकूलन गर्न धेरै समस्याहरु छन् यदि विश्वव्यापी औसत तापमान निरन्तर जारी रहन्छ।
तपाईले सोच्न सक्नुहुन्छ कि दुष्टको तहमा भएको वृद्धि वा हिमनदीहरूको पिघलनेले देशसँग केही गर्नुपर्दैन, तर हामी यो रिपोर्ट गलत हुनेछौं - जलवायु परिवर्तन र ऊर्जा संक्रमण कानूनका तथ्यहरू र तथ्या figures्कहरू by द्वारा तयार गरिएको उनी स्थिरता वेधशाला.
स्पेन एक देश हो धेरै कमजोर मौसम परिवर्तन गर्न। यसको प्रभावले पशु र बोट प्रजातिहरूको एक ठूलो संख्याको परीक्षण गर्दैछ, जस्तै ptarmigan, गिरगिट वा ग्रुसेज, जसको आन्दोलन कम छ र उनीहरूको इकोलोजिकल स्थानको सर्तहरूको साथ माग गर्दै छन्।
अर्कोतर्फ, देश यूरोपियन युनियनका केही क्षेत्रहरू मध्ये एक हो जहाँ वैज्ञानिक प्रमाणहरूले प्रस्ताव गर्दछ कृषि उत्पादकत्वमा कमी.
तापक्रम बढेको र हिमनदी पग्लने क्रममा समुद्री सतहमा भएको वृद्धि स्पेनी क्षेत्रको अर्को ठूलो चुनौती हो। वातावरणीय मन्त्रालयको एक प्रतिवेदनले त्यस्तो भविष्यवाणी गरेको छ पानीले तीन दशकहरूमा प्रायद्वीपीय तटको उत्तरी अनुहार र अल्बोरान सागरको face% आक्रमण गर्नेछ, जुन २० सेन्टीमिटरको वृद्धि हो।
के मौसम परिवर्तनलाई नियन्त्रण गर्न केहि पनि भइरहेको छ? धेरै छैन। यूरोपीय वातावरण एजेन्सीबाट उपलब्ध पछिल्लो डाटा कि प्रकट गर्दछ १ 1990 2014 ० र २०१ween बीच, कुल कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन १.17,5..XNUMX% ले वृद्धि भयो, जबकि सम्पूर्ण यूरोपियन युनियनमा तिनीहरू २ 23% ले गिरे। २०१ 2015 मा, कुल CO40,4 उत्सर्जनको .2०.%% बिजुली उत्पादन गर्ने प्लान्ट वा तेल उद्योगबाट आएको हो।
यसैले यो युरोपियन देश हो जुन उत्सर्जनको अनुपातमा बढी उत्सर्जन अधिकार किन्न आवश्यक छ। चेक बुकको स्ट्रोकमा, यसले २०१ 65 मा मात्र वातावरणमा पठाइएको million करोड tons० लाख टनलाई "अफसेट" गर्न सक्दछ। यो दुखको कुरा हो कि यो अझैसम्म बुझिएको छैन कि स्वच्छ र जीवित प्रकृति किन्न सकिदैन।
तपाईं नक्सा देखेर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » मौसम परिवर्तन » यो स्पेन मा मौसम परिवर्तन को प्रभाव को नक्शा हो
मौसम परिवर्तनले सरीसृपको जीवाणु वनस्पतिलाई असर गर्दछ